မိုးကောင်းကင်: May 2008
မေး- ကြာကြာထိုင်နိုင်မှ တရားရပါသလား။
ဖြေ- တရားအားထုတ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကြာကြာထိုင်နိုင်မှ တရားရတယ်ဆိုတဲ့ အစွဲက ကြီးလွန်းပါတယ်။ တရားဆိုတာ ကောင်းကျိုး ချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့ ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။ ကုသိုလ်မျိုးစုံနဲ့ ဆိုင်တာပေါ့။
ဒါနကုသိုလ် အလှူပေးတဲ့အခါ ထိုင်တဲ့အမူအရာနဲ့သာ အလှူပေးရမယ်လို့ သတ်မှတ် မထားပါဘူး။ သီလ ကုသိုလ်လည်း ထိုင်နေပြီးတော့သာ စောင့်ထိန်းရမယ့်လို့ မဆိုပါဘူး။ သမထ၀ိပဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စဉ်းစားကြဖို့ ကောင်းတယ်။
သမထ၀ိပဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုသိုလ်ကို ပွားများရင် သွားရင်း၊ ရပ်ရင်း၊ ထိုင်ရင်း၊ လျောင်းရင်း ပွားများလို့ ရပါတယ်လို့ ဘုရားရှင်က မိန့်တော်မူတယ်။ တကယ် လက်တွေ့မှာလည်း ပွားများလို့ ရတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ၊ ဓမ္မာနုဿတိ၊ သံဃာနုဿတိ စတဲ့ သမထကမ္မဋ္ဌာန်း တွေဟာလည်း က္ကရိယာပုတ် အမူအရာမျိုးစုံနဲ့ ပွားများလို့ ရပါတယ်။
ကသိုဏ်းဆယ်ပါး အားထုတ်ရာမှာတော့ (ပဋိဘာဂနိမိတ်) အပြင်အာရုံနဲ့ မိမိစိတ်ထဲမှာ ထင်တဲ့အာရုံ၊ ထပ်တူထပ်မျှ သဘောဆောင်တဲ့ ကသိုဏ်းနိမိတ်ဟာ စိတ်ထဲခိုင်မြဲအောင် မထင်ရှားသေးခင် အချိန်ခဏမှာ ထိုင်က္ကရိယာပုတ်ကို မပြောင်းပြင်ဘဲ နေပေးရပါတယ်။ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရင် ပဋိဘာဂနိမိတ်ထင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ ပျက်လည်း ပျက်တ်လို့ပေါ့။ ဒီနိမိတ်ထင်ရှားရင် ထသွားလို့ ရပါပြီ။ သထမ အားထုတ်ရာမှာ မထရ၊ မရွှေ့ရဆိုတာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခဏလောက်သာပါ။
၀ိပဿနာ တရားအတွက်ကတော့သွားရင် သွားမှန်းသိ။ ရပ်ရင် ရပ်မှန်းသိ၊ ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်ရင်လည်း စွန့်မှန်းသိလို့ ဘုရားရှင်က မိန့်တော်မူထားပါတယ်။ အထိုင်ကြာမှ တရားရတယ်ဆိုတဲ့ အစွဲကြီးကိုတော့ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြဖို့ ကောင်းတယ်။
ဘာဝနာတရားအားထုတ်ရာမှာ ထိုင်တဲ့ အမူအရာ က္ကရိယာပုတ်က အားမထုတ် တတ်သေးတဲ့ သူတွေအတွက် အခြေခံအစ သင့်တော်လို့ ညွှန့်ပြတဲ့ စကားပါ။ နိရောဓ သမာပတ်၊ ဖလသမာပတ် ၀င်စားတော်မူကြတဲ့ အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ အတွက်တော့လည်း ကြာကြာထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ချုပ်ငြိမ်းမှုချမ်းသာ ဖိုလ်ချမ်းသာ တွေကို ခံစားဖို့ စိတ်ရဲ့ အဓိဌာန်သဘောနဲ့ နေကြတာပါ။
အဓိကအားဖြင့် ၀ိပဿနာ အသိဥာဏ် ရအောင် အားထုတ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ရုပ်နာမ် ပရမတ်အာရုံကို ကြည့်နေရပါတယ်။ ရုပ်နာမ်အာရုံ ဆိုတာက ထိုင်နေနေ၊ ရပ်နေနေ၊ သွားနေနေ၊ သဘောတရား မပြောင်းလဲပါဘူး။ အမူအရာ ကိုယ်ကောင်ကြီးသာ ပြောင်းလဲ တာပါ။
ကြာကြာထိုင် နေပြီး အာရုံတခြား စိတ်ကသွားနေမယ်၊ ရောက်နေမယ်၊ ထိုင်နေရင်း အိပ်ပျော်နေမယ်၊ အသိလွတ်ပြီး မှိန်းနေမယ် ဆိုရင်တော့ ၀ိပဿနာ တရား မဖြစ်ပါဘူး။ အလကားပါပဲ။
ဒါ့ကြောင့် ကြာကြာထိုင်တာနဲ့ တရားရတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အသိဥာဏ်တိုးတက် မြင့်မားတာသာ တရားနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။
(သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်မှ ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ အဖြေများကို ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မိုးကောင်းကင် at 2:50 PM0ထင်မြင်ချက်များ
လိုက်မယ် .... လိုက်မယ်။
(ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ကဗျာလေးအား ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မိုးကောင်းကင် at 8:25 AM0ထင်မြင်ချက်များ
တင့်ဆန်းမွှေးမြသက်လုံးတကား။ ... ။
(သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်မှ မောင်သဲခေါင်၏ ကဗျာကို ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မိုးကောင်းကင် at 10:23 PM0ထင်မြင်ချက်များ
Flower, fruits, buds.
Some are tender and fresh,
Some still awaiting maturity,
Some are ripe,
Some shaken off by wind,
Some struck by rain.
Some are plucked,
Some rot and fall off for no apparent reason.
They fall off by day, by night, in the morning.
နေ့ကြွေ ညကြွေ နံနက်ကြွေ ။ ။
(သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင်မှ အရှင်နိမ္မလ၏ ကဗျာကို ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မိုးကောင်းကင် at 7:11 PM0ထင်မြင်ချက်များ
မှန်း၍ ကြောက်ဦး(အုံး)။ ။
(သာထွန်းပြန့်ဓမ္မစာစောင် မှ စာရေးဆရာ ကိုသိန်းဆွေ(ဆင်စွယ်)၏ ကဗျာကို ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မိုးကောင်းကင် at 6:44 PM0ထင်မြင်ချက်များ
Posted by မိုးကောင်းကင် at 12:29 AM0ထင်မြင်ချက်များ
ပြင်းစွာအားထုတ်ရာသတည်း။ ... ။
(ဘုတလင်ဦးမာဃ၏ ကဗျာကို ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by မိုးကောင်းကင် at 12:26 AM0ထင်မြင်ချက်များ
ပျော်ပါးခဲ့ဘူးတာ ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း မင်းနားနား ရှိနေတာ
Posted by မိုးကောင်းကင် at 10:58 PM0ထင်မြင်ချက်များ